Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos on Mac
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ee Mac
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ee Mac
Fadlan caawi i bogsii tirtiray Photos ka My Mac!
Aan u isticmaalo ah 10.5.8 iMac OS X. Waxaan tirtiray oo dhan photos aan ku fikiray ahaayeen qashinka si qalad ah. Oo waxaan iyaga ka heli kartaa meel aan iMac. Sidee ayaan u soo kaban karto, iyaga? Mahad badan.
Arrinta khasaaro sawir Tani waa runtii wax aad looga xumaado oo aad si dhib dib aan qalab waxtar ka heli kartaa sawiro tirtiray. Ka hor inta xallinta arrintan, waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan khasaaraha xogta digital. Sawirrada tirtiray aan dhab ahaantii ka soo baxay ayaa aad Mac, ay weli ku jiifsan in aad Mac xataa haddii aad iyaga ma arki kartaa qashinka Bin. Waxay baabi'i doono oo keliya haddii xogta cusub iyaga overwrites.
Waxaa hubaal ah in aad soo kaban karto sawiro tirtiray ka Mac leh qalab kabashada dhinac saddexaad sawir Mac. Wondershare Photo Recovery for Mac waa software aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado photos tirtiray ee Mac. No arrinta photos yihiin tirtiray ka qashinka bin ama laga badiyay sababta oo ah nidaamka ama qalad inflection virus, barnaamijkan ayaa kaa caawin kara. Waa awoodaan inay ka bogsadaan photos labada aad Mac iyo qalab lagu kaydiyo ku xiran waxaa la.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ah ka dibna bilowdo dib u soo kabashada.
Qabtaan Mac tirtiray Photos Recovery in 3 Talaabooyinka
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo dib u soo kabashada la Wondershare u Mac. Dadka isticmaala Windows sidoo kale dib u soo ceshano kartaa sawiro tirtiray ka Windows computer la version Windows.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho u bilowdo hawsha.
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Photo Recovery for Mac aad Mac. Waxaa lagu siin doonaa 2 hababka soo kabashada. Halkan aynu isku dayi "lumay Recovery File" wada.
Ka sokow, haddii aad u baxaysid si loo soo celiyo photos tirtiray ka qalab lagu keydiyo, fadlan hubi in qalabka si fiican ugu xiran kartaa Mac.
Tallaabada 2 Dooro xijaab si scan for photos tirtiray
Waxaad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo halkaasoo sawiro aad marka hore la tirtiray. Si aad u soo kabsado photos tirtiray, waxaad u baahan tahay in ay doortaan nooca file aad.
Ka dib markii xulashada xijaab iyo nooca file, kaliya aad u baahan tahay inaad doorato "Scan u tirtiray Files" oo guji "Scan" in ay sii wadaan.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay sawiro iyo kabsado iyaga eegista
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha helay tixi doona sida image qaab hoos ku qoran. Waxaad ku eegaan karo helay sawiro. Ama haddii aad xusuusan magaca sawirka, xitaa waxa aad ka raadin kartaa in bar baadhi ah.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan kuwa sawiro aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro folder kale ama xijaab si loo badbaadiyo sawirrada soo kabsaday si looga fogaado overwriting file.
7 Siyaabaha la hagaajin aad flash drive markii It`s ma aqoonsan Windows / Mac
Sida loo Beddelaan FLAC in MP3 on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Top 5 iPod si Mac Transfer Tools
Sida loo hagaagsan iPhone si Mac aan laga badinin Wax